Umbuso Wezokumaketha Okuzenzakalelayo 2015 | Martech Zone
UMbuso Wezokukhangisa Okwama-2015
NgoLwesithathu, Februwari 4, 2015 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 3, i-2015 Douglas Karr
Akungabazeki ngamandla wamandla wokumaketha kodwa kuyigama elingaqondakali nelisetshenziswe ngokweqile ukuthi cishe yonke ipulatifomu ikhuthaza… kepha bambalwa empeleni bahlanganisa zonke izici namathuba we. Abanye bayisebenzisela kuphela ukuthola, okunye ukuthengisa kuphela, okunye ukumaketha, okunye ukugcinwa. Amanye amapulatifomu awanazo izinto ezibalulekile njengokufaka amagoli okuhola noma ukuhlanganiswa. Futhi, njengoba lokhu kukhonjiswa kwe-infographic, izinkampani eziningi zilahlekile izinzuzo zokuzenzakalela kokumaketha ngokuphelele.
Namuhla ngokuqhuma kwamashaneli wedijithali kanye nobuchwepheshe ukonakala ngokuzikhethela njengomakethi wedijithali. Ukuzenzekelayo kokumaketha kungasiza ukubeka izinto ngendlela efanele ukuze uhlale uphezu kwezinto. Dlula kule infographic enokuqonda ukuze uthole umbono wangaphakathi wezwe lokumaketha okuzenzakalelayo manje. Isikhundla Sethimba²
Ngalezi zizathu, aseluleki amaklayenti ethu ukuthi ahambe nohlelo lwe- uhlobo oluhle kakhulu isisombululo sokumaketha. Ngivame ukwenza ihlaya lokuthi ukuthengisa isisombululo sokumaketha kufana nokuthengisa isiqandisi kumuntu olambile… kuhle kodwa akusizi ngaphandle kokuthi banokudla abazokufaka kukho. Lokho kudla kuyisu nokuqukethwe kanye nesikhathi sokwenza, ukuvivinya nokucwenga imiphumela. Amanye amapulatifomu adinga nezinsiza zokuthuthukisa noma zokuhlanganisa ukuthi; ngaphandle, umane ngeke athole imbuyiselo ephelele ekutshalweni kwemali.
Kubalulekile ukuthi uchaze futhi uhlolisise izinqubo zakho zangaphakathi nezangaphandle, uhambo lwakho lwamakhasimende, izinsiza zakho, nezinsizakusebenza zakho zokumaketha ngaphambi kwakho konke ukusayina kwisisombululo sokumaketha!
Tags: ukuzenzekelayo kokuzenzekelayoukumaketha okuzenzakalelayo infographicisikhundla2isimo sokumaketha okuzenzakalelayo
Intuthuko Ongayisebenzisa Ekumaketheni Komphakathi Namuhla!
Imbangela Nemiphumela Emangazayo Yezinkinga Zedatha